စုသမြှ ပိုကျဆံအကုနျလုံး သီခငျြးထဲမှာ မွှုပျနှံထားလို့ ကိုယျပိုငျကားတောငျမစီးနိုငျဘူးဆိုတဲ့ Ar-T – Askstyle
စုသမြှ ပိုကျဆံအကုနျလုံး သီခငျြးထဲမှာ မွှုပျနှံထားလို့ ကိုယျပိုငျကားတောငျမစီးနိုငျဘူးဆိုတဲ့ Ar-T
လူငယ်ကြိုက်တေးသံရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အားတီက EDM သီချင်းလေးတွေကို မြူးမြုးကြွကြွ သီဆိုတတ်သူ တစ်ဦးပါ။ အားတီရဲ့ သီချင်းလေးတွေက လူငယ်တွေကြားမှာ တော်တော်လေး ရေပန်းစားပြီး အောင်မြင်လှပါတယ်။ အားတီက သူ့ရဲ့အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက် တစ်ကိုယ်တော်အခွေတွေကိုလဲ များစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ သီချင်းကောင်းလေးတွေကို သီဆိုတတ်တဲ့ အားတီက မနေ့ကပဲ သီချင်းအသစ်လေးတစ်ပုဒ်ကို MV နဲ့ တကွ ပရိသတ်တွေထံ ချပြခဲ့ပါတယ်။
သီချင်းလေးက တေးရေးဆရာဝေကြီး ရေးစပ်ထားတဲ့ “နင်ငါ့ကိုမချစ်ဘူး” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးဖြစ်ပြီး MV ကိုတော့ အကယ်ဒမီများရှင် မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုံရွှေရည်က သရုပ်ဆောင်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသီချင်းလေးက MV ထွက်ထွက်ချင်းမှာပဲ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့ပြီး တစ်ရက်အတွင်းမှာတင် ကြည့်ရှုအားပေးသူ သိန်းနဲ့ချီရှိခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ထိုသီချင်းလေး ပေါက်သွားတာနဲ့ ပက်သတ်ပြီး Ar-T က “ကျ​​နော် ကားမရှိဘူး TAXI စီးရကျိုးနပ်သွားပြီ !! ကျ​နော်စုသမျှ ပိုက်ဆံ​တွေအကုန် သီချင်း နဲ့ mv မှာ ကျ​​နော့်ကို လက်ခံအား​ပေးတဲ့သူ​တွေအတွက် အကုန်သုံးပစ်တယ်။”
“ပွဲသွားရင် Black taxi စီးတယ် ။ ရိုးရိုးအပြင်သွားရင် သာမန် Taxi စီးတယ် ။ ကျ​နော်​ပြောပြတာကို ယုံမလား ? ” ဆိုပြီး ပြောပြထားပါတယ်။
Ar-T ကတော့ သူ့ရဲ့ အနုပညာကို တန်ဖိုးထားလို့လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Ar-T တစ်ယောက် ဒီထက်မက အောင်မြင်မှုတွေရရှိပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
လူငယျကွိုကျတေးသံရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ အားတီက EDM သီခငျြးလေးတှကေို မွူးမွုးကွှကွှ သီဆိုတတျသူ တဈဦးပါ။ အားတီရဲ့ သီခငျြးလေးတှကေ လူငယျတှကွေားမှာ တျောတျောလေး ရပေနျးစားပွီး အောငျမွငျလှပါတယျ။ အားတီက သူ့ရဲ့အနုပညာသကျတမျးတဈလြှောကျ တဈကိုယျတျောအခှတှေကေိုလဲ မြားစှာ ထုတျလုပျနိုငျခဲ့ပွီး အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိပိုငျဆိုငျခဲ့သူဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ သီခငျြးကောငျးလေးတှကေို သီဆိုတတျတဲ့ အားတီက မနကေ့ပဲ သီခငျြးအသဈလေးတဈပုဒျကို MV နဲ့ တကှ ပရိသတျတှထေံ ခပြွခဲ့ပါတယျ။
သီခငျြးလေးက တေးရေးဆရာဝကွေီး ရေးစပျထားတဲ့ “နငျငါ့ကိုမခဈြဘူး” ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးဖွဈပွီး MV ကိုတော့ အကယျဒမီမြားရှငျ မငျးသမီးခြောလေး ဝတျမှုံရှရေညျက သရုပျဆောငျပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ထိုသီခငျြးလေးက MV ထှကျထှကျခငျြးမှာပဲ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့ပွီး တဈရကျအတှငျးမှာတငျ ကွညျ့ရှုအားပေးသူ သိနျးနဲ့ခြီရှိခဲ့တာကို တှရေ့ပါတယျ။
ထိုသီခငျြးလေး ပေါကျသှားတာနဲ့ ပကျသတျပွီး Ar-T က “ကနြျော ကားမရှိဘူး TAXI စီးရကြိုးနပျသှားပွီ !! ကနြျောစုသမြှ ပိုကျဆံတှအေကုနျ သီခငျြး နဲ့ mv မှာ ကနြေျာ့ကို လကျခံအားပေးတဲ့သူတှအေတှကျ အကုနျသုံးပဈတယျ။”
“ပှဲသှားရငျ Black taxi စီးတယျ ။ ရိုးရိုးအပွငျသှားရငျ သာမနျ Taxi စီးတယျ ။ ကနြျောပွောပွတာကို ယုံမလား ? ” ဆိုပွီး ပွောပွထားပါတယျ။
Ar-T ကတော့ သူ့ရဲ့ အနုပညာကို တနျဖိုးထားလို့လညျး နှဈပေါငျးမြားစှာ အောငျမွငျမှုရရှိခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ Ar-T တဈယောကျ ဒီထကျမက အောငျမွငျမှုတှရေရှိပိုငျဆိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။